M&M: Tolow ilaa goormaa sidan loo kala lulanayaa? | Welcome to Lafweyne.com|
M&M: Tolow ilaa goormaa sidan loo kala lulanayaa?
May 10, 2017 - Comments off
Xalay waxaan iska raacay dad Soomaaliyeed oo badan oo wada jibbeysan oo ka amababaxayey Galbeedka London si ay usoo dhoweeyaan Madaxweynahooda. Markaanu tagnay gegida diyaaradaha ayaa la kala baxay qof waliba wuxuu hoosta kala soo baxay Calan Maamul Goboleed. Koox waliba dhinac bay isugu baxeen iyagoo raacaya meesha astaanta calankoodu ka muuqato. Mise aniga keliya ayaa meel cidla ah taagan!
In muddo ah ka bacdi ayaan arkay qolo kale oo wadata calankii Soomaaliya. Qoladii ayaan xaggooda aaday, mise cid aan gartoba ma laha! Waxay qoladani dhammaantood cunayeen shukulaato isku wada mid ah oo ay ku qoran tahay M&M! Waxay kaloo wateen sawirrada Madaxweyne Farmaajo iyo raysalwasaare Khayre. Waxaan weydiiyey iyagu cidday ahaayeen waxayna noqdeen Mar…..n iyo Mur…..e (M&M). Waxaan weydiiyey oo mar hadday M&M keliya yihiin maxay calan gaara u samaysan waayeen? Waxa la iigu jawaabay “qoladii naga horreysey ee Maj……n iyo Mud….d (M&M) waxay ka tiirin jireen madaxdooda annaga kuweennaan ka tiirinaynaa”. Dabadeed gabadh baa ila kaftantay shukulaatadiina ii soo taagtay oo tiri “fiiri laakiin, annaga qoladii naga horreysey waxaan uga fiicannahay shukulaatada dadka kale waxaan uga ogollahay”Anna kaftan baan ugu jawaabay oon ku idhi ‘ma maanta keliyaad shukulaatada wax ka bixinaysaan? Waxaan kaloo sii raaciyey inaad wax ka bixisaan gartaye, in la idin la yeesho ma ogoshihiin?
Intaa dabadeed waan fekerey hareeraha ayaan fiiriyey, waxaan raadiyey bal inaan raadiyo qolo xaafaddayada ah oo aad xafladaha iyo soo dhoweynta caan ugu ahayd oo “Khaatumo” la odhan jirey, mise qof dhaqaaqaaba kama joogo. Telefoonkii ayaan diray rag iyo haween kadiriinta Khaatumo aan ku ogaa ayaan wacay. Waxay iyagoo yara xanaaqsan ii sheegeen “odaygii [Cali Khaliif] ayaa nagu yidhi wadahaddallo ayaan Somaliland la wadaa meel fiicanna wax waa ii marayaan Garaaddadiina Imaaradkay wadahadalladaa ujoogaan markaa yaan qof idin ka mid ahi soo dhoweyntaa London ka qayb gelin!” Qoladan Khaatumo waxa iiga soo baxday inay ku jiraan jaahwareer (dilemma). Dhinac Cali Khaliif ka tiiriya ayay is leeyihiin, dhanka kalena waxay si aad ah uga cadhaysan yihiin xafladayntaas iyo soo dhoweyntaas ay ka baaqdeen.
Ugu danbayntii anoo isla sheekaysanaya oo cagajiid ah oo garan la’ ciddaan ahay (identity crisis) ayaan tareen gundhada soo jaray. Somaliland ayaan soo xusuustay intaan tareenka la soo socday, laakiin iyana waxaan kaga quustay waraysigii Wasiirkooda Arrimaha Debedda Dr. Sacad oo yidhi annaa shirkaasi nama quseeyo waddanka aannu jaar nahay oo ee “Soomaaaaliyaa” ayaa loo qabanayaa, haddana sii raaciyey wixii manfac ee ka soo baxa ee magaca Soomaali ku soo baxa qaybtayadaannu ka rabnaa.
Dabddeedna waxaan tareenka kasoo degey anoo isla hadlaya oo naftayda ku leh ‘TOLOOW ILAA GOORMAA SIDAN LOO KALA LULANAYAA”